Wiricheya Nyanzvi Mazano - Wiricheya Maitiro Ekutenga Sachigaro
Kuenderana kuri nyore
Zvigaro zvekufambisa zvinouya muhukuru hukuru huna kuti ugone kurema kwako. Standard 17 - 19 ″ Narrow 15 ″ - 17 ″ Yakafara 19 ″ - 24 ″
Iyo yakarerutsa chigaro chako zvichave nyore kusimudza, kutakura uye kuisa mumotokari. Zvigaro zvekufambisa zvinouya muzvikamu zvina zvehuremu. Yakajairwa 35+ lbs Chiedza 29 - 34 lbs Ultralight 0 - 29 lbs
Mavhiri: Macheya ese ekufambisa anouya nematai erabha "akasununguka." Hapasisina kunetseka nezvekuwana gorofa kana kukuzadza matai nemhepo.Wheel saizi: Yekutakura zvigaro matai anouya ari matatu saizi: 3 ″ uye zvishoma, 7 ″ uye 8 ″. Iwo madiki madhiri emavhiri anowanzo kuuya nezvigaro zvakaenzana. Vamwe vevatengi vedu vakaita sehukuru hwe12 ″ yekuwedzera kugadzikana.
zvose Mawiricheya huya ne 1½ ”jira kana chigaro chevinyl. Kukuita iwe chigaro kugadzikana, kana kana iwe ukagara mune yako wiricheya zvimwe ipapo maawa maviri zuva nezuva, tinokurudzira kuti uise mari mumutsago. Kune matatu marudzi emakusheni Nyaradzo makushiti: Furo kana gel makushoni, kuitira nyaradzo Positioning pamakusheni: Akasangana macushion anotendera mushandisi akarongeka mamiriro Midziyo yekudzivirira: gel kana macushion emhepo anobatsira mushandisi kudzivirira maronda emubhedha
Ona vedu Kudzoka Makushoni zveshure nyaradzo uye mamiriro
17 ″ - pasi pe150 lbs 19 ″ 150 - 250 lb. 20 ″ 250 - 350 lb. 22 ″ 350 - 450 lb.
Waist uremu urefu Chigaro Kureba
kusvika ku30 ″ kusvika ku 200 kusvika ku6 ' 16 "-18"
30 "-36" kusvika ku 250 kusvika ku6 ' 17 "-19"
36 "-40" kusvika ku 350 kusvika 6'2 ″ 19 "-22"
40 ″ uye kumusoro 450 lbs. uye kumusoro kusvika 6'2 ″ - 6'4 ″ 22 ″ uye kumusoro
Hombe kumashure vhiri
Kusundidzirwa nemushandisi kana shamwari
wiricheya zvigaro zvinouya muhukuru hwakasiyana-siyana kuti uwane huremu hwako. Standard 17 - 19 ″ Narrow 15 ″ - 17 ″ Yakafara 19 ″ - 24 ″ Yakawedzera Wide 24 ″ - 34 ″ Vechidiki 10 ″ - 15 ″
Iyo yakareruka chigaro chako zvichave nyore kusimudza, kutakura uye kuisa mumotokari. Mawiricheya uya muzvikamu zvehuremu izvi. (chinyorwa: kureruka kwechigaro ndiko kunowedzera kudhura) Yakajairwa 35+ lbs. Chiedza 29 - 34 lbs. Ultralight 0 - 29 lbs. Mutambo 0 - 25 lbs.
Iyo yakajairika chigaro kukwirira iri 20-21 ″ kubva pasi. Izvi zvinoshanda kana iwe uri pamusoro pe5 'kureba. Kana iwe uri mupfupi pane 5 'iwe unogona kuwana nguva yakaoma kubuda mu wiricheya uye kukwirisa chigaro kukwirira kunenge kuri madikanwa. Pfupi (Asingasviki 19 ″) Yakajairwa (19 ″ -20 ″) Yakareba (Inopfuura makumi maviri ″)
Kune maviri marudzi etsoka ekuzorora. Swingaway inobviswa uye kusimudza inobviswa iyo inobvumidza iwe kusimudza makumbo ako 2 degrees (?) Cherekedza: gumbo rese rinozorora richisuduruka uye BVISA. Zvigaro zvese zvinouya zvakajairika neswingaway inobviswa tsoka dzekutsika uye inosanganisirwa mumutengo Kana iwe uchida kukwidziridza gumbo zororo unokwanisa kuodha iwo kune imwezve muripo kana iwe gadzirisa hurongwa hwako.
Armrest inopa ruoko nefudzi rutsigiro. Kune matatu marudzi ezvigaro zvemaoko. Yakazara Kureba (3 ″) iyo inomhanya izere urefu hwechigaro uye ipfupi dhesiki kureba (15 ″) izvo zvinokutendera iwe kuti uswedere padyo netafura kana tafura. Kureba kunochinja mwero ruoko kuzorora kukwirira kuri? mamwe mamodheru anokutendera kuti uchinje kukwirira. Dzinobviswa / dzinodzosera kumashure maoko. Unogona kubatsirwa kubva kubvisika kana kudzosera ruoko kumashure kuti zvive nyore chinja mukati nekubuda pachigaro. Chairs ane tafura kureba sarudzo Zvigaro zvine chinogadziriswa kukwirira sarudzo Zvigaro zvine bvisika / flip kumashure sarudzo
zvose Mawiricheya huya ne 1½ ”jira kana chigaro chevinyl. Kukuita iwe chigaro kugadzikana, kana kana iwe ukagara mune yako wiricheya zvimwe ipapo maawa maviri zuva nezuva, tinokurudzira kuti uise mari mumutsago. Kune matatu marudzi emakusheni Nyaradzo makushiti: Furo kana gel makushoni, kuitira nyaradzo Positioning pamakusheni: Akasangana macushion anotendera mushandisi akarongeka mamiriro Midziyo yekudzivirira: gel kana macushion emhepo anobatsira mushandisi kudzivirira maronda emubhedha 17 ″ - pasi pe150 lbs 19 ″ 150 - 250 lb. 20 ″ 250 - 350 lb. 22 ″ 350 - 450 lb.
Yakanakisa Mazano Ekutenga Wiricheya
Chikamu cheZano mukutenga Wiricheya